“Anyị Ga-amata Ndị Ha Bụ” | Akwụkwọ Mgbaafọ nke 2015
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Arabic Armenian Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Malagasy Myanmar Norwegian Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tsonga Turkish Ukrainian Xhosa Yoruba Zulu
“Otu Ụbọchị Anyị Ga-amata Ha”
N’ihe dị ka afọ 1935, otu nwoke aha ya bụ Pablo González malitere ịgụ Baịbụl. O bi n’obodo a na-akpọ Kibao Vali. Ọ gatụrụ chọọchị Protestant ma hapụ ya mgbe ọ hụrụ na ha anaghị eme ihe ọ gụtara na Baịbụl. N’agbanyeghị na ọ naghịzi aga chọọchị, ọ na-amụ Baịbụl, na-akọkwara ndị mmadụ ihe ndị ọ mụtara. O bidoro ịkụziri ndị ezinụlọ ya na ndị agbata obi ya ihe ndị ọ na-amụta na Baịbụl. O mechakwara gaa n’obodo ndị dị nso zie ndị mmadụ ozi ọma. O rere ugbo ya na ehi ya ma jiri ego o retara na ha na-agba ụgbọ aga ekwusa ozi ọma.
N’ihe dị ka afọ 1942, Pablo na-aga eleta ma ó nweghị ihe ọzọ narị ezinụlọ abụọ bi n’obodo ndị dị nso. Ya na ha na-enwechikwa ọmụmụ ihe anya n’agbanyeghị na ya na Ndịàmà Jehova ahụtụbeghị. Ọ na-agwa ndị mmadụ ka ha na-amụ Baịbụl, na-emekwa ihe ndị ha na-amụta. Ọtụtụ ndị mere ihe ọ gwara ha, kwụsị ịṅụ sịga na ịkpọ anwụrụ. Ndị lụrụ ihe karịrị otu nwaanyị chụkwara ndị nwunye ha, ha na nwunye mbụ ha ebirizie.
Otu n’ime ndị gere ntị n’ozi ọma Pablo nọ na-ekwusa bụ otu nwaanyị aha ya bụ Celeste Rosario. O kwuru, sị: “Mgbe m dị afọ iri na asaa, nwa nwanne mama m aha ya bụ Negro Jiménez so ná ndị na-aga ọmụmụ ihe Pablo González na-eduzi. Ọ bịara soro anyị mụọ ihe ma gụọrọ anyị ebe ụfọdụ na Baịbụl. Ebe ndị ahụ ọ gụrụ mere ka m kwụsị ịga Chọọchị Katọlik. Baịbụl a na-agụrụ anyị na chọọchị bụ Baịbụl Latịn. Anyị anaghịkwa aghọta ya. Obere oge Negro Jiménez bịachara soro anyị mụọ ihe, Pablo González letara anyị ma gbaa anyị ume. Ọ sịrị anyị: ‘O nweghị ihe jikọrọ anyị na ọtụtụ chọọchị ndị a dị n’obodo anyị. Ma, anyị nwere ụmụnna n’ebe niile n’ụwa. Anyị amabeghị ndị ha bụ ma ọ bụ ihe ha na-aza, ma otu ụbọchị, anyị ga-amata ha.’”
Pablo nwere ndị ha na ya na-enwe ọmụmụ ihe na Lọs Kakaọs Salkedo, Mọnti Adentro, Salkedo, nakwa na Vila Tenaris. N’afọ 1948, mgbe Pablo kwụsịrị na Santiago ka o buru ụgbọala ọzọ, ọ hụrụ Ndịàmà Jehova abụọ na-ekwusa ozi ọma n’okporo ámá. Ha nyekwara ya Ụlọ Nche. N’oge ọzọ, otu nwanna nwaanyị hụrụ Pablo nye ya akwụkwọ abụọ. Ọ gwara ya bịa Ncheta Ọnwụ Jizọs ha ga-eme na Santiago. Pablo mechara gaa. Ihe ọ nụrụ mgbe a na-ekwu okwu Ncheta Ọnwụ Jizọs tọrọ ya ụtọ. O kwuziri na ya emechaala chọta ndị na-akụzi ihe dị na Baịbụl. O kwukwara na ndị niile nọ ebe ahụ bụ ndị ọ chọwara kemgbe.
Ndị ozi ala ọzọ gara hụ ndị ha na Pablo na-enwe ọmụmụ ihe. N’otu n’ime ebe Pablo na ndị mmadụ na-enwe ọmụmụ ihe, ha hụrụ mmadụ iri abụọ na asaa torola eto nọ na-eche ha. Ụfọdụ n’ime ha ji ụkwụ gaa kilomita iri abụọ na ise tupu ha erute, ebe ndị ọzọ ji ịnyịnya gbaa kilomita iri ise. N’ebe ọzọ, mmadụ iri asaa na asatọ bịara ọmụmụ ihe ha. N’ebe ọzọkwa, mmadụ iri isii na itoolu bịakwara ọmụmụ ihe ha.
Pablo nyere ndị ozi ala ọzọ ahụ aha otu narị mmadụ na iri ise nwere mmasị. Ndị a amụwala Baịbụl, na-emekwa ihe Baịbụl kwuru. Ha dị umeala n’obi, jirikwa ife Chineke kpọrọ ihe. Ihe dị ha mkpa ugbu a bụ iso ná nzukọ ga na-ahazi ha ma na-agwa ha ihe ndị ha ga na-eme. Nwanna Nwaanyị Celeste kwuru, sị: “Mgbe ndị ozi ala ọzọ ahụ letara anyị, anyị na ha nwere ọmụmụ ihe. N’ọmụmụ ihe ahụ, e mere ndị mmadụ baptizim. Ọ bụ m bụ onye mbụ e mere baptizim n’ezinụlọ anyị. E mechakwara mee mama m Fidelia Jiménez na Carmen nwanne m nwaanyị baptizim.”
E nwere mgbakọ sekit mbụ na Dọminikan Ripọblik na Santiago. E nwere ya malite n’abalị iri abụọ na atọ ruo n’abalị iri abụọ na ise na Septemba afọ 1949. Mgbakọ a mere ka ụmụnna kwusasiwe ozi ọma ike. Ọtụtụ ndị chọrọ ịma ihe anyị nọ ebe ahụ na-eme bịara, ya emezie ka ndị niile bịara gee okwu ihu ọha e kwuru na Sọnde ruo narị mmadụ abụọ na iri isii. E mekwara mmadụ iri abụọ na asatọ baptizim. Mgbakọ abalị atọ a mere ka o doo ọtụtụ ndị ọhụrụ anya na nzukọ a bụ nzukọ Chineke ji na-emezu uche ya.
Otú E Si Malite Izi Ozi Ọma na Dọminikan Ripọblik
Ndị ozi ala ọzọ aha ha bụ Lennart Johnson na nwunye ya Virginia bịara
Nwanna Knorr na Nwanna Franz bịara
Mgbakọ sekit mbụ e nwere
E mere mmadụ iri abụọ na asatọ baptizim n’Osimiri Nọt Yak
Gọọmenti machiri Ndịàmà Jehova iwu